Aabaha dhalay Neymar Jr oo soo afjaray wararka la xiriirinaya inuu dib ugu laabanayo kooxda Barcelona – Gool FM
(Brazil) 11 Nof 2019. Aabaha dhalay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa soo afjaray wararka xanta ah ee la xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda Barcelona mustaqbalka.
Neymar Jr ayaa ka tagay kooxda Barcelona sanadkii 2017, isagoo ugu dhaqaaqay naadiga Paris Saint-Germain qiimo dhan 222 milyan oo euro, kaasoo ilaa iyo haatan ah heshiiska ugu qaalisanaa abid taariikhda kubadda cagta.
Xiddiga rere Brazil ayaa suuqii xagaaga ee la soo dhaafay wuxuu ku dhawaaday inuu ka tago kooxda reer France ee Paris Saint-Germain si uu markale dib ugu laabto Barcelona, laakiin ugu dambeyntii wuxuu iska sii joogay garoonka Parc des Princes.
Haddaba Aabaha dhalay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa wareysi uu bixiyay dhawaan wuxuu ku sheegay:
“Neymar Jr diyaar uma ahan inuu ku laabto Barcelona, waxaan hada ku suganahay dalka Brazil”.
Si kastaba ha noqotee, Neymar Jr ayaa la dhibtoonaya dhaawac waqtigan la joogo, kaasoo ka soo gaaray kulankii dhex maray xulalka Brazil iyo Nigeria isbuucyo ka hor, isagoo ka baxay garoonka daqiiqadii 12-aad ee qeybta hore ciyaarta.